Unobangela kombono kokomoya out'd wena? Esona sizathu siphambili-apreyizali umbono ngokomoya ngaphandle
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Unobangela kombono kokomoya out'd wena? Esona sizathu siphambili-apreyizali umbono ngokomoya ngaphandle
Nokuba ungasuki ungaba uyintoni na umbono ngokomoya hits, ingxaki kubalulekile kakhulu ukuba Umbuzo.
hit izangoma (abaxeli-mathamsanqa) kunye nabanye abantu bafuna kakhulu iinkonzo apreyizali umbono ngokomoya, kodwa sicela ukwazi Okokuqala kwindawo yokuqala kunye nto kukuba aphume kuba umbono ngokomoya kunye nenkuthazo nokuxela ithamsanqa. umbono ngokomoya
is isenzo ukubukela kunye ividiyo oomoya umgcini ihlabathi kunye Umbuzo ayibonakali engqondweni izangoma. Ukuhambelana ngokuthethana utitshala oosiyazi ngubani na ngenxa umahluko kwamaza, kuyo ividiyo inokwenzeka ukuba ezinjalo ayikhangeleki ngokucacileyo.
Kakade ke, kokukhona ukuba abantu ukuba kukho amandla kunye nokusebenza phakathi oosiyazi kunye abaxeli-thamsanqa katitshala, kodwa ividiyo ubunakho ngumbono ngokomoya uya kuba ngaphezulu, kodwa akanayo loo 100 ekhulwini.
ngokufuthi kangangoko isizathu sokuba umbono ngokomoya kunye nenkuthazo ithamsanqa amabali ingaphandle
Njengoko kuchaziwe ngoku, umbono ngokomoya kunye nenkuthazo ukubhula ukuhambisana ezingxoxo ri abaxeli-mathamsanqa okanye kungase izangoma kuphambuka, kodwa kukho isizathu ukuphambuka elithelekelelweyo.
ukuba ingxaki kwimeko yokucebisana ngokwabo kunokuba esecaleni abaxeli-mathamsanqa le ngxaki.
"de ●●, ngoku ngumntu olungileyo ndahlukana nayo."
"Umtshato xa umdlali kunyaka-25 ubudala ●●"
"xesha lide ngoku lo mcimbi"
njl , izangoma Ndicinga ukuba uqikelelo ezahlukeneyo kunye nengcebiso nge umbono ngokomoya, kodwa ukuba trust ulwalamano kunye izangoma na ezabanjwa, nina Akumangalisi rhoqo abonisane akenzi landela elo cebiso.
umzekelo, "yena nangoku liselikho, xa injongo yokwenene ufuna ukutshata kuwe, bawuphanga nje kuwe uhlobo eza kuyenza. Ngoko ke nxamnye naye, xa umgama kufuneka zibekwe." ndifumene icebiso unayo.
Noko ke, yena iimvakalelo ozithandayo kunye kuhlaselwa luloyiko ixhala ukuhamba, siyaqhubeka ngokubafekethisa ukuba ecaleni kuye, emva koko, abe ngumfazi iluncedo, ukuba loo wawa uthethe lomtshato ityala kwenzeka rhoqo.
ukuba akazange enze kwi iingcebiso abaxeli-mathamsanqa njengotitshala kuba, mna ezahlukeneyo elizayo kwixesha elizayo ukuba zingajongwa embonweni ngokomoya aya kutyelela.
mntu wena, ezifana ukuba xa ityala kukuba nangona abaxeli-mathamsanqa ngunobangela "! umbono ngokomoya" loku ngokuphindaphindiweyo ukuba ngaphandle amanyathelo ukucela le iphefumlelwe ithamsanqa-bha ezahlukeneyo abaxeli-mathamsanqa kwixesha elizayo kuwe. Mngxamiseni
umbono ngokomoya ngaphandle, yaye kutheni ungakwazi kuba noyolo, enyanisweni, asinto ingaqhelekanga kukuba kwakhe okanye ngokwakhe. Nangona le mbono ngokomoya
ayenzelwanga hits-100%, nguye nabani kuphambuka amaxesha amaninzi kakhulu, kanye okanye akukho tyala ngokwam, isandla esifubeni sakhe Lo